Taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada PL oo ku dhintay howlgal ka dhan koox daroogada ka ganacsata - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTaliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada PL oo ku dhintay howlgal ka dhan koox daroogada ka ganacsata
August 9, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Cusmaan Cumar Maxamed. [Sawir Hore]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland Cusmaan Cumar Maxamed ayaa ku dhintay howlgal ka dhan koox daroogada ka ganacstada kaasoo ka dhacay magaalada Gaalkacyo maanta oo Axad ah, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka.
Holwgalka oo xalay saq dhexe ay ciidamadu qaadeen ayaa ka dhacay xerada Kabista oo kutaala gudaha Gaalkacyo halkaasoo ay kooxda hubeysan ku iibin jireen khamriga.
Mid kamid ilaalada taliyaha ayaa sidoo kale ku dhintay howlgalka, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Ciidanka ayaa gacanta ku dhigay ilaa sideed qof oo katirsan kooxda, sidoo kale waxay qabteen khamri, hub fudud sida AK-47 iyo baabuur.
Taliyaha dhintay Cusmaan Cumar Maxamed oo loo yaqiin Cusmaan Itoobiyaan ayaa dhawaan xilka la wareegay kadib markii taliyihii hore ee ilaalada madaxtooyada Puntland uu is-casilay.
Madaxweynaha Puntland ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid taliyaha, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada.
“Madaxweyne Deni ayaa tilmaamay Alle ha u naxariistee Marxuum G.Sare Cismaan Cumar Maxamed in uu ahaa shakhsi wanaagsan oo shaqo yaqaan ah, sarkaal daacad ah oo ku wanaagsan hogaaminta ciidanka, samir iyo iimaanna ka siiyo dhammaan shacabka reer Puntland, ciidamada Qalabka sida, kuwa Madaxtooyada, ehelkii, qaraabadii, asxaabtii iyo qoyskii uu ka baxay.”
Car bomb in Mogadishu hits district compound
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least six people were killed in a suicide car bomb attack in Mogadishu on Sunday, security sources said. The attack occurred when the car bomb exploded outside the compound of Halwadag district [...]
Garowe-(Puntland Mirror) Haayada World Vision ayaa shalay oo Isniin ahayd gudaha degmada Dangorayo ee gobolka Nugaal kusoo gabagabaysay tababar muddo labo beri ah uga socday guddiyo ganacsi iyo guddi kala shaqeeya fududaynta mashruuca ganacsiyada yar-yar. [...]